ငိုလွန်းသည့် ဆယ်ငါးရက်သမီးလေးကို အိပ်မရဖြစ်ရသည်ဟုဆိုကာ ဖခင်ဖြစ်သူက တိုက်ပြတင်းပေါက်ကနေ လွှင့်ပစ်၍ သေဆုံး
ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင် ဆယ်ငါးရက် သမီးလေးတစ်ဦးကို ငိုယိုလွန်းသည်ဟုဆိုကာ ဖခင်ရင်းဖြစ်သူက တိုက်ပြတင်းပေါက်က လွှင့်ပစ်ခံရ၍ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မိုင်ရာသတင်းတွင် ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက်ကဖော်ပြသည်။ဘယ်လ်ဂရိတ်မြို့ တော်တွင် အသက် ၃၅နှစ်ရွယ် နီမန်ဂျာပီထရိုဗစ်ဆိုသူက ကလေးငယ် ငိုယိုလွန်းသဖြင့် အိပ်မရဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ နံနက် ၅နာရီခွဲခန့် က တိုက်ပြတင်းပေါက်မှ လွှင့်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
At 1/13/2015 02:06:00 PM No comments:
MPT က ၂၀၁၅ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 3G ကွန်ရက်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ ဖြန့်ကျက်သွားမည်ဟုဆို
ဂျပန် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် KDDI , Sumitomo တို့နှင့် ပူးပေါင်းထားသည့် MPT အနေဖြင့် ၂၀၁၅ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 3G ကွန်ရက်ကို တစ်နိုင်ငံ လုံးအနှံ့ ဖြန့်ကျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်နေသေးသည့်
At 1/13/2015 01:57:00 PM No comments:
အစိုးရက အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးရန် မိမိတို့အဖွဲ့ကို အသိအမှတ်မပြုခြင်းမှာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုဟု ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ပြော
ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရေ စီမဟာမိတ်တပ်မတော် (MND-AA) အနေဖြင့် အစိုးရတပ်မတော် နှင့် ပြန်လည်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက် တော့ မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ် လာရခြင်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးရာတွင် ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးရန် ၎င်းတို့ ဘက်က အဆင်သင့်ရှိသော်လည်း အစိုးရဘက်က အသိအမှတ် မပြုခြင်းမှာ အချက်တစ်ချက် အဖြစ်ပါဝင်ကြောင်းMNDAA က ပြောကြားလိုက်သည်။
At 1/13/2015 10:49:00 AM No comments:
မန္တလေးတွင် တရားမ၀င် ဆေးခန်းဖွင့်သည့် တရုတ်နိုင်ငံသားများအား အမှုစစ်နိုင်ရန် လိုအပ်လျှင် နိုင်ငံတကာ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ အကူအညီရယူမည်
မန္တလေးမြို့ တော်ဝင် နှင်းဆီပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွင် တရားမ၀င်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ် သဖြင့် အမှုဖွင့်ခံထားရကာ တိမ်းရှောင် နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံသားများ အား အမှုစစ်ဆေးနိုင်ရန် လိုအပ် လျှင် နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ (Inter-pol) ၏ အကူအညီ ရယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးခရိုင် ရဲ တပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
မန္တလေးမြို့ ဘူတာကြီးအနီး ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီဆေးရုံသုံးလွှာ တွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အ တွင်းက တရုတ်နိုင်ငံသား ခြောက် ဦးသည် တရားမ၀င်ဆေးဝါး ကုသမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
At 1/13/2015 10:31:00 AM No comments:
MPT ၀န်ဆောင်ခလျှော့ချမှုတွင် ၇၃၊၄၉ ဖုန်းများ မပါဝင်သဖြင့် အသုံးပြုသူများ ဝေဖန်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း(MPT) ၎င်း တို့၏ ဝန်ဆောင်ခကို လျှော့ချရန် ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို ဇန်န၀ါရီ လ ၉ ရက်က စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက် ယင်းအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်မည့် ဖုန်းများတွင် CDMA 800 MHz နှင့် 450 MHz ဖုန်းများ မပါဝင်သဖြင့် အဆိုပါ ဖုန်းအသုံးပြုသူများက ဝေဖန်ကြသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) က ၀န်ဆောင်ခလျှော့ချမည့် အစီအစဉ်တွင် CDMA 800 MHz နှင့် 450 MHz ဖုန်းများမပါဝင်ဟု MPT-KDDI-Sumitomo ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းစု၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Mr. Nagashima က ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
At 1/13/2015 10:29:00 AM No comments:
MPT ၏ ၁,၀၀၀ ကျပ်တန်နှင့် ၃,၀၀၀ ကျပ်တန် ငွေဖြည့်ကတ်များ စတင်ရောင်းချ
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက တန်ဖိုးနည်း ငွေဖြည့်ကတ်များ စတင်ရောင်းချလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်မှစတင်ကာ ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်ဟု အရောင်းဆိုင်များမှ မေးမြန်းသိရှိရသည်။ ၁,၀၀၀ ကျပ်တန် ငွေဖြည့်ကတ်များနှင့် ၃,၀၀၀ ကျပ်တန် ငွေဖြည့်ကတ်များကို ပုံမှန်အရောင်းဆိုင်များနှင့်etop up အရောင်းဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
At 1/13/2015 10:13:00 AM No comments:
‘မုသာဝါဒဖြင့် အုပ်ချုပ်နေသည့် တိုင်းပြည်’ ဟု ပြက်လုံးထုတ်ခံရ
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ Sky Net ရုပ်သံလိုင်းတွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေသည့် အစီအစဉ် တစ်ခုတွင် ဟာသလူရွှင်တော် ပွမ်ပွမ်နှင့် ချစ်ချော တို့၏ ပြက်လုံးများသည် ထုတ်လွှင့်မှု ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရပြီး ‘မုသာဝါဒဖြင့် အုပ်ချုပ်နေသည့် တိုင်းပြည်’ ဟု ပြက်လုံးထုတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ် သည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၁ရက်ညက ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပညာရေးကွန်ယက် (၄)နှစ်ပြည့် ရံပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွင် 'မုသာဝါဒနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်' ဟု ဟာသလူရွှင်တော်နှစ်ဦးက ပျက်လုံးထုတ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
At 1/13/2015 10:05:00 AM No comments:
ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်တွင် ထွန်တုံးတိုက် တောင်သူနှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ်အမိန့်ချ
ပြည် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ပဲခူးတိုင်း ပြည်ခရိုင် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် တရားရုံးက ထွန်တုံးတိုက် တောင်သူ နှစ်ဦးကို ပိုင်နက်ကျူးလွန် မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် နှစ်လစီ ဇန်န၀ါရီ၁၂ ရက်တွင် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း တောင်သူနှစ်ဦးဘက်က လိုက်ပါကူညီပေးသူ ကိုဝင်းလှိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“နှစ်ယောက်စလုံးကို ထောင်နှစ်လစီ ချလိုက်တယ်ခင်ဗျ” ဟု ဟု အမိန့်ချစဉ် တရားရုံးတွင် ရှိနေသည့် ကိုဝင်းလှိုင်က ပြောသည်။
At 1/13/2015 09:37:00 AM No comments:
MECTEL ဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြုသူများ အတွက် SMS တစ်စောင်လျှင် ၂၅ ကျပ်မှ ယခု ၁၅ ကျပ်သို့ လျှော့ချလိုက်ကြောင်း မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ တာဝန် ရှိသူက ပြောကြားလိုက်သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်မှစတင်ကာ ထိုသို့လျှော့ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းအပြင် ယခင် ကတ်ပျက်၊ ကတ်ပျောက် အတွက် ၂၀,၀၀၀ ကျပ် ပေးသွင်းရရာမှ ယခု ၁,၅၀၀ ကျပ် သာ ပေးသွင်းရန် လည်း လျှော့ချသတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
At 1/13/2015 09:25:00 AM No comments:
သမ္မတ၊ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးများပါဝင်သော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ နေပြည်တော်၌ပြုလုပ်
သမ္မတ၊ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးများ၊နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားပြုခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတ အိမ်တော်ငုရွှေဝါခန်းမ၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကို နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင်စတင်ခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုအခြေခံသည့် အမျိုးသားပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများစတင်ကျင်းပနိုင်ရေး၊ လွတ်လပ်၍တရား မျှတသော ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ပြီး ညင်သာစွာ အသွင်ကူးပြောင်းသောနိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်များပေါ်ပေါက်ရေးတို့အတွက် ညနေ ၄ နာရီခန့်အထိ ဆွေးနွေးမှု များပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
At 1/13/2015 09:17:00 AM 1 comment:
အကြမ်းဖက် ဆက်နွှယ်မှု စွဲချက်ဖြင့် အစ္စလမ် ဘာသာဝင် ၂၀ ဦးကိုထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည် ချမှတ်
ပြည်ပအကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး ခံနေရသော အစ္စလမ် ဘာသာဝင် ၂၀ ဦးကို တောင်ကြီး ခရိုင်တရားရုံးက ယနေ့တွင် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်မှ ထောင်ဒဏ် ၁၉ နှစ် အထိ အသီးသီး အမိန့်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
“အမှုတွဲ စစ်ဆေး ပေါ်ပေါက်ချက်အရ တရားခံတွေ ပြစ်မှု ကျူးလွန်တယ်ဆိုတာ တရားလိုဘက်က ထိထိမိမိ ခိုင်ခိုင်မာမာ မဖော်ထုတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလို ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တဲ့ အပေါ်မှာ ကျနော်တို့လည်း တော်တော်လေး အံ့အားသင့်တာပေါ့။ ပြစ်ဒဏ်တွေက ပြင်းထန်လွန်းတယ်။ ဖြောင့်ချက်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ၃ ယောက်က လွဲရင် ကျန်တဲ့သူတွေက ညိစွန်းမှု မရှိဘူး” ဟု အဆိုပါ အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေဦးသိန်းရွှေက ပြောသည်။
At 1/13/2015 08:55:00 AM No comments:
နေပြည်တော် အရာရှိဝန်ထမ်းအိမ်ရာအချို့ ဖောက်ထွင်းခံနေရ
နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ရှိ အစိုးရအရာရှိ များနေထိုင်သည့် ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ များတွင် နေ့လယ်ဘက်တွင် ဖောက်ထွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
‘‘ဝန်ထမ်းတွေမရှိတဲ့ နေ့ လယ်ခင်းမှာ ဝင်ခိုးတာ။ ယူတာ တောင် တခြားပစ္စည်း တွေမယူ ဘူး။ ရွှေနဲ့ငွေကိုပဲ အဓိကခိုးယူကြတယ်’’ဟု ငွေကျပ်၁၅ သိန်း ဖောက်ထွင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
အစိုးရဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ရှိ တံခါးပတ္တာများမှာ ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း၊ နေ့ခင်းဘက်လူပြတ် ခြင်း၊ လုံခြုံရေးမရှိခြင်း စသည့် အားနည်းမှုများရှိနေကြောင်း နေပြည်တော်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ခြောက်နှစ်ကြာနေထိုင်သူတစ်ဦး ကပြောသည်။
At 1/13/2015 08:47:00 AM No comments:
မက်ဆီ နျူအာတို့ကို မဲအပြတ်အသတ် အသာယူပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆု ရော်နယ်ဒို ဆွတ်ခူး
ရီးရဲလ်တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုဟာ မက်ဆီ နျူအာတို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ပေးအပ်တဲ့ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ၆၁ ဂိုး သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ရီးရဲလ်နဲ့အတူ ဖလားသုံးလုံး ရခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ မဲ ၃၇.၆၆ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မက်ဆီ နျူအာ တို့ကို အပြတ်အသာ ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီက ၁၅ . ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းပဲ မဲရခဲ့သလို နျူအာ ကလည်း ၁၅ . ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲ မဲရခဲ့ပါတယ်။
At 1/13/2015 08:35:00 AM No comments:
သေနတ်ပစ်ဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရသူအမှု တရားလိုမအား၍ ရက်ချိန်းထပ်ယူ
ဂျီအီးတပ်၏အတွင်း သေနတ်ပစ်ဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသော ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ကျော်ဘ၏သားအမှု ဒုတိ ယမြောက်ရုံးချိန်းတွင် တရားလို ရဲအရာရှိက အလုပ်မအားသဖြင့် ဇန်န၀ါရီ ၂၈ ရက်သို့ ထပ်မံ ရက် ချိန်းယူခဲ့ကြောင်း ဒဂုံမြို့နယ် တရားရုံးမှသတင်းရရှိသည်။
‘‘တရားလိုအမှုစစ်က အလုပ်မအားလို့ ခွင့်ထပ်ယူထား တယ်။ ၂၈ ရက်ပြန်ချိန်းလိုက် တယ်’’ဟု ဒဂုံမြို့နယ် တရားရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
At 1/13/2015 08:30:00 AM No comments:
တရားစွဲခံရသော ဘားဆိုင်မန်နေဂျာ၏ အတူနေချစ်သူက အမှုကိုအေးအေးချမ်းချမ်း ပြီးစေလိုကြောင်းလျှောက်လဲ
ပုဒ်မသုံးခုဖြင့်တရားစွဲခံ ထားရသည့် VGastro Bar ဆိုင်မှ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဖီးလစ်၏ အတူနေစေ့စပ်ထားသူက ၎င်းတို့ မိသားစုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ သည် အထူးနေရာတစ်ခုဖြစ်သော ကြောင့် ရင်ဆိုင်နေရသောအမှု ကို အေးအေးချမ်းချမ်းပြီးစေလို ကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ်တရားသူ ကြီးထံ တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို နားကြပ် တပ်ထားသည့်ပုံဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာပေါ်တင်၍ ကြော်ငြာ ခြင်းကြောင့် ပုဒ်မသုံးခုဖြင့် တရား စွဲဆိုခံထားရသည့် VGastro Bar ဆိုင်မှ အထွေထွေမန်နေဂျာနယူး ဇီလန်နိုင်ငံသားဖီးလစ်၊ ဆိုင်ပိုင် ရှင်ထွန်းသူရိန်နှင့် မန်နေဂျာ ထွဋ် ကိုကိုလွင်တို့ကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်က ငါးကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
At 1/13/2015 08:28:00 AM No comments:
တရုတ်သံရုံးအနီး လက်ပံတောင်းအရေးဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်လေးဦးကို ယနေ့ရုံးထုတ်မည်
တရုတ်သံရုံးအနီး လက် ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွင် ဦးဆောင် သူ လေးဦးကို ရန်ကုန်အနောက် ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့နယ်တရားရုံး၌ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် ရုံးထုတ် မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်ညနေက တရုတ်သံရုံးအနီးတွင်လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း ကန့်ကွက်သူများနှင့် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဦးဆောင်သူများဖြစ်သည့် ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဦးနေမျိုးဇင်၊ ဒေါ်နော်အုန်းလှ၊ ဒေါ်စိန်ထွေးနှင့် ကိုတင်ထွဋ်ပိုင်တို့ လေးဦးကို နံနက် ၉ နာရီခွဲခန့်တွင် ဒဂုံမြို့နယ် တရားရုံး၌ ရုံးချိန်းဆင့်ခေါ်ထား ကြောင်း တရားစွဲခံရသူများ ဘက် မှ ရှေ့နေလိုက်ပေးမည့် ဦးရော ဘတ်စန်းအောင်က ပြောသည်။
At 1/13/2015 08:26:00 AM No comments:
သမ္မတအိမ်တော် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဒေါ်စုနှင့်တိုင်းရင်းသားများ ထိပ်တိုက်တိုး ဟု ဆို
ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ သမ္မတအိမ်တော် ဆွေးနွေးပွဲတွင် NLD ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ ထိပ်တိုက်တိုး ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် များက တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ပြည်သူများ လူမှုစီးပွား တိုးတက်ရေးက အရေးကြီးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အချေအတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
At 1/13/2015 08:21:00 AM No comments: